Wararka - Marka coronavirus waxaa dili kara laambada ultraviolet
Endoscopy oo leh Nidaamka kamaradda
Nalalka Dayactirka Caafimaadka
Nalalka Falanqaynta Biochemical
Nalalka Qallooca indhaha
Welch allyn heine ent nalalka
Nalalka Xenon Endoscope
Iftiinka afka ilkaha ee 'LED'
Nalka LED Desk
LED Daawade Filim Daawade
Nalalka Caafimaadka ee LED iyo Loupes
Laydhka Nalalka Hoggaamiya
Nalalka Imtixaanka Caafimaadka
Laydhka 'OT OT'
Hal qubbad OT Light
Marka coronavirus waxaa dili kara laambada ultraviolet
Cudurka faafa! Waxay noqon doontaa tallaabada wadajirka ah ee dadka oo dhan Festifaalka Gu'ga ee 2020. Kaddib markii aan la kulantay "dabool" ay adagtahay in la helo oo ay cadayaan Shuanghuanglian iyo kaftan kale, saaxiibbadeena ayaa si tartiib tartiib ah diiradda u saaray laambadda jeermiska UV.
Marka coronavirus-ka cusub waxaa lagu dili karaa laambada 'ultraviolet lamp'？
Qorshaha ogaanshaha cudurka sanbabada ee coronavirus iyo qorshaha daaweynta (nooca tijaabada ah) ee lagu daabacay daabacaadii afaraad ee Komishanka Ilaalinta Caafimaadka Qaranka iyo Maamulka Gobolka ee dawada dhaqameed ee Shiinaha ayaa xustay in fayrasku u nugul yahay ultraviolet iyo kuleylka, heerkulkiisuna yahay 56 daqiiqo oo sare 30 daqiiqo. Ether, 75% ethanol, jeermiska dila chlorine, peracetic acid iyo chloroform ayaa si wax ku ool ah u baabiin kara fayraska. Sidaa darteed, laambadda jeermiska lagu dilo jeermiska 'ultraviolet disinfection' waxay waxtar u leedahay dilka fayraska.
UV waxaa loo qaybin karaa UV-A, UV-B, UV-C iyo noocyo kale iyadoo loo eegayo dhererka dhererka dhererka. Heerka tamarta si tartiib tartiib ah ayuu u kordhaa, kooxda UV-C (100nm ~ 280nm) guud ahaan waxaa loo isticmaalaa jeermiska iyo jeermiska.
Nalalka jeermiska lagu dilo ee loo yaqaan 'Ultraviolet disinfection' waxay isticmaashaa iftiinka 'ultraviolet light' ee uu soo saaro laambadda meerkuriga si loo gaaro hawl nadiifinta. Tikniyoolajiyadda jeermiska lagu dilo ee loo yaqaan 'Ultraviolet disinfection' waxay leedahay waxtarka nadiifinta jeermiska ee aan la barbar dhigi karin marka la barbar dhigo teknoolojiyada kale, iyo waxtarka nadiifinta ee ilmo-galeenka ayaa gaari kara 99% ~ 99.9%. Mabda 'ahaan saynis ahaan waa in lagu dhaqmo DNA-da noolaha, in la burburiyo qaab dhismeedka DNA, lagana dhigo inay waayaan shaqada taranka iyo is-taranka, si loo gaaro ujeeddada jeermiska.
Nambarka jeermiska dila jirka ee loo yaqaan 'ultraviolet disinfection' ma waxyeello u leeyahay jirka aadanaha? Nadiifinta Ultraviolet waxay leedahay faa'iidooyinka midab la'aan, dhadhan la'aan iyo walxo kiimiko ah oo aan looga tagin, laakiin haddii aysan jirin tallaabooyin ilaalin ah oo la adeegsado, waa wax aad u fudud in waxyeello weyn loogu geysto jirka bini'aadamka.
Tusaale ahaan, haddii maqaarka soo ifbaxay ay ku shubaan iftiinka noocan ah ee loo yaqaan 'ultraviolet light', nalka wuxuu u muuqan doonaa casaan, cuncun, saxaro; kuwa daran xitaa waxay sababi doonaan kansar, burooyinka maqaarka iyo wixii la mid ah. Isla mar ahaantaana, sidoo kale waa "dilaaga aan la arki karin" ee indhaha, kaas oo sababi kara caabuq isku-xirnaanta conjunctiva iyo kiliyaha. Cir-daadashada muddada dheer waxay u horseedi kartaa indho-beel. Ultraviolet wuxuu kaloo leeyahay shaqada burburinta unugyada maqaarka aadanaha, taasoo maqaarka ka dhigeysa mid gabowsan. Xilliyadii ugu dambeysay ee aan caadiga ahayn, kiisaska waxyeellada ay keeneen isticmaalka aan habbooneyn ee laambadda jeermiska ee loo yaqaan 'ultraviolet disinfection lamp' ayaa aad u badan.
Sidaa darteed, haddii aad ka iibsato laambadda jeermiska dila jirka ee loo yaqaan 'ultraviolet disinfection' guriga, waa inaad maanka ku haysaa markaad isticmaaleyso:
1. Markaad isticmaaleyso laambadda jeermiska ee ultraviolet, dadka, xayawaanka iyo dhirta waa inay ka baxaan goobta;
2. Indhuhu waa inaysan ku dhaygagin laambadda jeermiska ee ultraviolet-ka muddo dheer. Shucaaca Ultraviolet wuxuu leeyahay waxyeelo gaar ah maqaarka aadanaha iyo xuubka xabka. Markaad isticmaaleysid laambadda jeermiska ee ultraviolet, fiiro gaar ah ha loo yeesho ilaalinta. Indhaha waa inaysan si toos ah u eegin isha iftiinka ultraviolet, haddii kale indhaha way dhaawici doonaan;
3. Markaad isticmaaleyso laambada jeermiska ee loo yaqaan 'ultraviolet disinfection lamp' si loo nadiifiyo maqaallada, loo faafiyo ama loo laalaadiyo, loona ballaariyo aagga ay ku fuuqbaxeyso, masaafada wax ku oolka ahi waa hal mitir, waqtiga shucaacu waa qiyaastii 30 daqiiqo;
4. Markaad isticmaaleysid laambadda jeermiska ee ultraviolet-ka, bey'adda waa in la nadiifiyaa, oo waa inaysan habaas iyo ceeryaamo hawadu ku jirin hawada. Marka heerkulka gudaha uu ka hooseeyo 20 ℃ ama qoyaanka ku dhow in ka badan 50%, waqtiga soo-gaadhista waa in la dheereeyaa. Ka dib markaad xoqdo dhulka, ku nadiifi laambada 'ultraviolet' ka dib marka dhulku qalalo;
5. Markaad isticmaasho laambadda jeermiska ee ultraviolet-ka, xusuusnow inaad hawada gasho 30 daqiiqo ka hor intaadan gelin qolka. Ugu dambayntii, waxaannu soo jeedinaynaa in haddii qoyskaagu aanu baadhitaan ku samayn bukaanka, ha jeermiska ka saarin alaabta guriga taal. Sababtoo ah uma baahnin inaan dilo dhammaan bakteeriyada ama fayrasyada nolosheena, habka ugu wax ku oolka badan ee looga hortagi karo infekshinka cusub ee coronavirus waa in la baxo wax ka yar, waji xidho iyo gacmaha si joogto ah loo dhaqo.
Waqtiga boostada: Jan-09-2021
La-talin Bilaash ah 18979109197
Cinwaanka Maya. 666, Wadada Yaohu West 5th 5th, Changdong Town, Nanchang High-tech Development Zone Nanchang, Jiangxi, China
Siraa Ilkaha, Siraalka Imtixaanka Halogen, Iftiinka Caafimaadka, derbiga nalka baaritaanka, Laydhka Nalalka Hoggaamiya, Nalalka Halogen ee Falanqeeyaha Kiimikada,